Twitter na-ebunye naanị bọtịnụ maka Periscope na gam akporo | Gam akporosis
Ruo izu 3 Twitter fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-agagharị na mmelite na mmelite ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwu nke ọrụ ọ na-arụ. Twobọchị abụọ gara aga, e megharịrị ọhụrụ na interface na Ihe eji eme ihe, achọtara n’ime ule oge maka ọnọdụ abalị ma gbaba ọtụtụ ule iji tinye ya Kpọmkwem bọtịnụ na-agbasa ibi na Periscope.
Ọfọn, ule ndị ahụ agafeela, taa, site na akaụntụ Periscope, ọ kwuwapụtala na ọ bụ na-egosipụta bọtịnụ maka nkwanye na ezigbo oge na gam akporo. Nkọwa iji buru n'uche na n'oge ahụ ọ dị naanị na gam akporo; Ndị nke iOS ga-echere ntakịrị iji nweta atụmatụ a na-adọrọ mmasị maka ngwa, Periscope, nke ga-arụ ọrụ ka ukwuu na ezumike.
Ebe ọ bụ na Twitter nwere njikọ chiri anya na Periscope, ọ bụ nzuzu na n'ụzọ ụfọdụ enweghị ike ịmalite mgbasa ozi site na ngwa ngwa nke netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta micro-messaging. Ọ bụ eziokwu na ugbu a ụdị usoro a, na-agbagharị na ozugbo ma ọ bụ mgbasa ozi dị ndụ, bụ na-enwe nnabata dị ukwuu site na ụdị ọrụ niile.
Ese nanị bọtịnụ pụtara ebe a chọtara ihe niile ọzọ a na - eme, dịka ịkekọrịta onyonyo, ndekọ vidiyo ma ọ bụ foto. N'ụzọ dị otu a, oge ị bidoro mgbasa ozi Periscope na Twitter, ndị niile na-eso ụzọ ga-enwe ike mụta ya, ọ bụ ezie na nke a adịla mbụ, naanị ihe na - eme ugbu a bụ ịdị mfe nke ịnweta.
Otu ngwa ngwa na oge obula na-agbakwụnyekwu nọmba ịghọ otu n'ime ndị kachasị mma, ihe siri ike iche n'echiche afọ ole na ole gara aga mgbe ahụmịhe onye ọrụ ọ nyere na gam akporo na-egbu mgbu na mmadụ ga-achọ ngwa ndị ọzọ dịka Falcon Pro a ma ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Twitter enweela bọtịnụ maka Periscope wuru n'ime gam akporo